नेकपाका विद्यार्थी नेता ईन्द्र भुषालको नजरमा प्रकाश दाहाल !
नेकपाका विद्यार्थी नेता ईन्द्र भुषालको नजरमा प्रकाश दाहाल ! - Nepal Talk
श्रावण २९ गते, २०७७
आषाढ़ १७ गते, २०७६ मा प्रकाशित
जन्म, विवाह, मृत्यु, सफलता, स्मृति अथवा मान्छेका जीवनका धेरे परिघटना आजसँग अर्थपूर्ण हुने ठान्छन्। २०७४ मंसिर ३ गते बिहानै मेरो मोबाइलमा घण्टी बज्यो, एक्कासी कसैले आत्तिदै भन्यो, ‘ प्रकाश दाईलाई बिरामी भएर हस्पिटल लगेको छ रे।’ सोचें, सामान्य केही भएको होला। सायद प्रकाश दाई निरोगी भएका कारण पनि मैले त्यसो सोचेको हुनुपर्छ।
मलाई लाग्यो हस्पिटल लगेको छ, राम्रो भइहाल्छ नि भन्ने भयो। म त्यस समय काठमाडौ मै भएकोले तुरुन्त नर्भिक हस्पीटल पुगे। त्यहाँ मानिसहरुको घुइँचो लागेको थियो। माहोल एकदमै सुनसान थियो। त्यसै क्रममा त्यहाँ कसैले भन्यो जे हुनु भइहाल्यो, तपाईं लगायत परिवारलाई समवेदना छ। त्यो आवाज मेरो कानमा गुञ्जियो।
म स्तब्ध भएँ, यो के भएको हो, मन बेचैन भयो, ऑशु थामिएनन्। विगतमा प्रकाश दाईसँग बिताएका हरेक पल स्मरण हुन थाले, मनमनै प्रार्थना गर्न थालें, ‘यो सबै गलत होस्, प्रकाश दाईलाई ठीकठाक देख्न पाउँ। तर, समयले त्यसो गरेन। अन्तत : प्रकाश दाईले हामीलाई साँच्चै याद मात्र छोडेर सदाका लागि बिदा लिइ सक्नु भएको रहेछ।
हामी एउटै छानामूनी लामो समयसँगै बस्यौं, प्रकाश दाईसँग मेरो छुट्टै सम्बन्ध थियो। हामी एक नजिकका आत्मीय दाजु भाई थियौं। सँगै घुम्न जाने, कुनै काम गर्दा पनि सँगै गथ्र्यौ हामी, सँगै रमाइलो गर्ने गथ्र्यौं हामी। वास्तवमा, प्रकाश दाई सामान्य स्वभावको हुनुहुन्थ्यो। सोझो हुनुहुन्थ्यो। सामान्य कुरामा रमाउनु हुन्थ्यो। बाटोमा राखिएका ठेलागाडाका मःम खॉदा औधी खुशी हुनुहुन्थ्यो प्रकाश दाई! अनावश्यक खर्च नगर्ने बानीको हुनुहुन्थ्यो। उहाँको जीवन सैली देख्दा कहिले काही पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का छोरा जस्तो पनि लाग्दैन थियो। सामाजिक काम गर्न औधी रुची भएका कारण उहाँले विदेशमा अलपत्र नेपाली युवाहरुलाई स्वदेश फर्काउने अभियान नै चलाउनु भएको थियो। त्यस अभियानमा म पनि जोडिएको थिए। युवाहरुका हर समस्यामा प्रिय हुनुहुन्थ्यो प्रकाश दाई।
उहाँको बारेमा केही भ्रम छरिए, उहाँमाथि निरन्तर प्रहार भइरह्यो। जीवनमा उहाँले चालेका सबै कदम रहर पक्कै थिएनन्। कति त बाध्यता पनि थिए। तर, दुनियाले उहाँका बाध्यता बुझ्ने र खोतल्ने प्रयास कहिल्यै गरेनन्। कहिले काहीँ लाग्छ, ‘प्रकाश दाईको बारेमा जस्तो गलत प्रचार गरियो, उहाँ बिल्कुल त्यस्तो हुनुहुन्थिएन। आज उहाँ हामीसँग हुनुहुन्न। म घरिघरि सोच्छु, ‘समाजले प्रकाश दाईप्रति किन यति धेरै अन्याय गरेको होला? उहाँका राम्रा काम र अनुकरणीय देन किन ओझेल पारिएको होला?’
प्रकाश दाईले बढ्दो उमेरसँगै आफूलाई परिपक्व बनाउँदै जानु भएको थियो। दोस्रो पटक प्रकाश दाईको बुवा (हाल) नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँको सचिवालयमा बसेर गरेको मेहेनत अहिले पनि मन्त्रालयका सचिव र कर्मचारीहरु सम्झन्छन्। प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रचण्डले गरेका धेरै निर्णयहरुमा प्रकाश दाईको सहयोग, सल्लाह र बेजोड मेहेनत छ भन्ने कुरा मलाई राम्रोसँग महसुस अनि स्मरण हुन्छ।
अन्तत : प्रकाश दाईले छोडेर गएको पनि दुई वर्ष पुग्न लागेको छ। समय बलवान छ, जीवनमा मृत्यु एक मात्र सत्य हो। यसमा भन्नु केही पनि छैन। तर, प्रकाश दाईको जीवनमा मृत्यु छिटो आयो। यो नै हामी सबैका लागि ठूलो पीडाको विषय हो। भौतिक शरीर नभए पनि उहाँको देशप्रतिको माया, परिवारप्रतिको जिम्मेवारी, युवाप्रतिको स्नेह र मोह अनि समृद्ध र आधुनिक नेपालका लागि गरेको योगदान सधैं स्मरणीय रहनेछ।
प्रकाश दाई !! व्यक्तिगत रुपमा तपाईले गरेको सहयोग र सम्मानप्रति ऋणी छु। आभारी छु, जीवन भरि आभारी रहने छु। तपाईले देखेका अधुरा सपना सकेसम्म पूरा गर्ने कोशिश गर्नेछु। यही नै तपाईका लागि सच्चा श्रद्धाञ्जली हुनेछ। हार्दिक श्रद्धाञ्जली प्रिय प्रकाश दाई !!
स्वर्गीय प्रकाश दाहालका विषयमा तत्कालीन अखिल (क्रान्तिकारी) का केन्द्रीय उपाध्यक्ष ईन्द्र भुषालले लेखेका हुन्।
माघ २ गते, २०७६
फौजी कमान्डको पर्यायवाची बनेका आइजिपी सर्बेन्द्र खनाल
पौष २५ गते, २०७६
ओली-प्रचण्ड दिनहुँ भेटिन्छन् भेटिँदैनन् सभामुख, ओलीले अडान नछोडेपछि बेग्लै मोर्चाबन्दी !
पौष २१ गते, २०७६
माथिल्लो कर्णाली राष्ट्रघाती सम्झौता हो यसलाई तत्काल खारेज गर्नुपर्छ
पौष २० गते, २०७६
प्रचण्डका पछाडि किन लागिरहेका छन् पुराना माओवादीहरु ? – हस्तबहादुर केसी
विश्वका हरेक परिवर्तनमा युवाको महत्त्वपूर्ण योगदान हुन्छ!
पौष १६ गते, २०७६
अब मुलुकको उपलब्धि ICU मा पुर्याउने कि, जिवन्त राख्दै बचाउने ?
‘म जिवित छँंदै विश्वलाई नेपाली समाजवादको मोडल दिने छु’ : प्रचण्ड
विश्वले एक नेताका रूपमा स्वीकारेको व्यक्ति मात्र हैन,संस्था हो प्रचण्ड!
संसदबाट एमसीसी पास गर्न कोमल ओलीको माग
कार दुर्घटनामा शबाना आजमी गम्भिर घाइते
घाँस झार्दै गर्दा खसेर वडासचिवको मृत्यु
ओली–प्रचण्ड सहमति: सभामुखमा अग्नि सापकोटा निश्चित
नेता नारायण काजी पनि एमसिसीको पक्षधर
Copyright © 2020 Nepal Talk - All rights reserved.